ईज्जत जोगाउन मेला – Hello Punarwas
मान्छेका लागी संसारमा सबैभन्दा ठुलो कुरा ईज्जत हो । मान, सम्मान ईज्जत,प्रतिष्ठामा खलल पुग्ने कुरामा मान्छेले कुनै सम्झौता गर्दैन र गरीनु पनि हुँदैन । झन महिला र बालबालिका प्रति जो कोहि पनि चिन्तीत हुन्छन नै । नेपालका सिमानामा बसोवास गर्ने नेपाली यस्ता बिषयमा बढिनै चिन्तित देखिनु सोभाबिकै हो । भारत संग सिमाना जोडिएका नेपालका सबै भु–भागमा बसोवास गर्ने नेपालि चिन्तीत र असुरक्षीत महसुस गरीरहेका छन । केहि दिन पहिले मलाई सुदुरपश्चिम बाट तिहारमा कफिको निम्तो आएको थियो । मैले बिना हिच्किचावट स्वुकार्यको थिए ।
तिहारमा सुदुरपश्चिम आँउदा कफि खानेकुरा । मैले कफिसंगै धेरै गुनासा र निरासा पनि सुने । सिमानामा भएको ज्याजति र महिला, बालबालीका हरुको ईज्जत जोगाउन सुरुगरीएको मेला हेर्न पनि गए । भारतको खिरि जिल्लामा पर्ने सम्पुर्णनगरमा रातिको समयमा लाग्ने मेलामा नेपाली दर्शकलाई रोक्नको लागी नेपालमै मेला लगाउन नौ बर्ष पहिले देखि सुरु गरीएको रहेछ । मेला हेर्दा दुख मात्र सुनिएन भारत प्रति आक्रोसित भएका नेपाली युवाको आक्रोष पनि देखियो । खिरि जिल्लाको सम्पुर्णनगर र कञ्चनपुर जिल्लाको बिपट्टा बजारमा एक किलोमिटरको दुरीमा मात्र छ ।
सिमानामा नेपाली दर्शकलाई गरीने व्यवहारले आजित भएपछि मेला नेपालमै लगाउन सुरुगरीएको कुरा पनि मेला हेर्दा हेर्दै गरीएको कुरा कानिमा थाहा पाईयो । मेलामा भारतिय गित बजाउन र गाँउन समेत प्रतिबन्ध लगाएको देख्दा खुसिले झरेका आँसु थाम्ने सकेन । किनकी गोबिन्द गौतम त्यहि क्षेत्रका बासिन्दा थिए उनि सिमानाको लडाईमा शहिद भए । त्यस क्षेत्रका जनताले यो मेला नौ बर्षदेखि लगाउन सुरुगरेका रहेछन । भारतिय बजार सम्पुर्णनगरमा पनि तिहारको मौका छोपी रातिको समयमा मेला लाग्दो रहेछ । नेपाली हरुलाई आर्कसित गर्न विभिन्न किसिमका नृत्य देखाईदो रहेछ ।
त्यहि नृत्यमा नसाको तालमा झुमेका नेपालीहरु पैसाको वास्थानै नगर्दा रहेछन । उता नेपाली छोरी बहिनि हरुमाथि भारतिय युवाले लगाउने गिद्धे नजरले नेपाल भारतका युवाहरुविच झकडाको विउ रोपिदो रहेछ । जंगलको विचमा लाग्ने मेलामा नेपालीहरु लुटपाट संगै महिला हरुको समेत ईज्जत लुटिदो रहेछ । दैनिक उपभोग्य सामानको किनमेल देखि काम गर्न समेत भारतकै भर पर्ने त्यसक्षेत्रका जनताहरु रातिको मेला हेर्न जाँदा गरीने ब्यावहारले दिक्क भएपछि परि जान रोक्नकै लागी वारी मेला सुरुगरेका रहेछ । यो कुरा मलाई त्यस क्षेत्रका बासिन्दा तथा परोपकार युवा क्लका अध्याक्ष चन्द्र सिं बोगटीले बताएका हुन । पारी रोक्न वारी मेला लगाउन सुरुगरेपछि धैरै सुधार भएको बताउदै उनले थपे सिमानाको दुख सागर भन्दा गरीरो र हिमाल भन्दा ठुलो हुँदोरहेछ सिमानाका जनता अबिभावक गमाए जस्ता भयौ सर । तर बोगटीलाई मैले पत्रकार हुँ सम्म नभनेकोमा अहिले पछुतो लागेको छ । पत्रककार हुँ भनेको भए केहि अरु कुरा भन्थेकी ? म त्यो मेला हेर्न नेता तारालामा तामा संग गएको थिए । तिहारमा कफिको निम्तो दिने तामाङले कफिको सुर्को संगै गुनासा र निरासाका कुरा सुनाए ।
तामाङले नै मलाई दिउँसो गोविन्दको हत्या भएको ठाँउ देखाए उन्को नाममा निमार्ण गरीएको उद्योन पनि घुमाए पछि राति मेला हेर्न बिचपट्टा तिर लगेका हुन । मेलाको समापन कार्यक्रममा प्रमुख अथिति भएमा नेता तामाङले मलाई पनि आफुसंगै बस्न आग्रह गदै अथिति समेत बनाए । तामाङ सुदुरपश्चिम प्रदेस नेकपाका प्रमुख सचेतक हुन । कञ्चनपुरको सिमाना भारत संग जोडिएको छ । ब्रहमदेव,गड्डाचौकि, दोधारा चादनि देखि विचपट्टा डोकेबजार सम्मको सिमाना भारत संग जोडिएको छ । महाकाली पारीको दोधारा चाँदनिमा भने आर्थिक कारोवार नै भारतिय रुँपैयामा हुने गर्दछ । सिमाना मात्र जोडिएको छैन प्रर्यटकीए क्षेत्र प्यारातालमा भारतियको मनमौजी चल्छ ।
कञ्चनपुर जिल्लाको शारदा नहर उत्तर टनकपुरमा २२२ बिघा जमिन भारत सरकारले अतिक्रमित गरेको छ । सीमा स्तम्भको निशाना नै नरहने गरी भत्काइएको छ । ब्रह्मदेव मण्डीमा सीमा स्तम्भ गायब गरेर अतिक्रमण गरिएको छ । महाकाली सन्धीमा पानि आधा आधा भनेपनि हिउँदमा खेतिपातिको समयमा नेपाल तर्फ पानिनै नपठाउने र वर्खा सुरुभएपछि नेपाल तिरका ढोका खोली नेपाली हरुलाई दुख दिने छाडेको छैन । डोके बजार क्षेत्रमा बेला बेला दुधुवा नेस्नल पार्कको सुरक्षको नाममा नेपाली जनतालाई दुख दिन छाडेको छैन । केहि बर्ष पहिले प्याराताल नेपालले संरक्षेण गर्दथ्र्याे र तालमा माछामार्ने ठेक्कासमेत जिल्ला बिकास कार्यलय कञ्चनपुर बाट हुनेगर्दथ्यो । अहिले भारतिय पक्षले पनि तालमा माछाको ठेक्का गर्ने गरेको छ । अहिले ताल पनि भारतमा नै पर्दो रहेछ ।
कफि पिउदै गर्दा तारालामा तामाङले भनेका थिए खुला सिमाना भएकै कारण सिमार्वती गाँउमा लागुऔषध कारोवार समेत बढेका छ । र्भखर र्भखर पहाड बाट तराई झरेका युवाहरुलाई लक्षीत गरी भारतिय युवाहरुले लागुऔषध कारोवार गर्ने गरेको र खुला सिमाना भएकै कारण रोकथाममा समस्या आएको पनि बताएका थिए । उनले निरास हुदै भने हामिले सोचेको समाज निर्माण गर्न सकेनौ । नेपाल भारत र चिन दुई ठुला छिमेकिको बिचमा रहेको छ । भेषभुष, भाष,संस्कृति, खुला सिमाना भारत संग भएपनि भारतबाट नै नेपाली जनताले दुखपाउने गरेका छन । चिनबाट भने नेपालले दुख पाएको छै सिमाना समेत लुटिएको छैन । सिमाविद बुद्धिनारायण श्रेष्टको भनाई मान्नेहो भने चिनमा परेको गौरीसंकर हिमाल र आधा चिनमा परेको लाङटाङ क्षेत्र चिनले नेपाललाई र्फकाएको थियो ।
तर भारतले कहिलै असल क्षिमेकिको भुमिका निर्वाह गर्न र नेपाली जनताको मन जित्न सकेन । म कञ्चनपुर बाट र्फकेको केहि दिनमा सुदुरपश्चिमकै कालापानि भारतले आफ्नो सिमाना भित्र पारेको नक्सा र्सावजनिक ग¥यो । सुदुरपश्चिम मात्र होईन देशनै आन्दोलीत भएको छ । भारत संग सिमाना जोडिएका सबै जिल्लामा जनताले सास्ती बेहोरी रहेका छन । नेपाल सरकारले कुटनितिक पहल गर्न सकेको छैन । नेपालको ६० हजार हेक्टर हेक्टर भुभाग भारतले कब्जा गरेको छ । ईतिहास पढाउने सरले भनेका थिए नेपालको सिमाना मेची–महाकाली नदी हुन् । सुगौली सन्धिमा पनि त्यही छ । पश्चिममा महाकाली वारिको ठूलो भू–भागमा भारतको गरेको हस्तक्षेप नेपाल सरकारले रोक्न सकेका छैन । जस्ले गर्दा नेपाली जनताले दुख पाउनु परेको छ । जमीनको लालपुर्जा नेपाली नापी विभागले दिएर नेपाली जनताको हातमा भएपनि जमिन भारतियले कब्जा गरेको बसेको छन ।
भारतसंग सिमाना जोडिएका २७ वटा जील्लाहरू छन र लगभग भारतले सजीलो ठाउमा अतिक्रमण गर्ने गरेको पाइन्छ । सबैभन्दा बढी लिम्पियाधुरा–कालापानीमा ३७ हजार हेक्टर जग्गा भारतले कब्जा गरेको छ । चिनसंग भारतले युद्ध हारेपछि १८५६ सालमा नेपालको कालापानि, लिम्पियाधुरा कब्जा गरेको हो । हाल आएर लिम्पियाधुरा नेपालको सरकारी नक्सामा समेत समावेश गरिएको छैन । नेपाल भारत सिमानामा भारत ले लगभग ८६ स्थानमा अतिकर्मन गरेको भएपनि नेपाल सरकारको तर्फबाट कुनै पहल भएको देखिदैन । दुई देशिय सचिव स्तरीय सिमा समस्या समधान समिति गठन भएपनि काम गर्न सकेको छैन ।
नेपाल को करिब ६० हजार हेक्टर जमिन पनि भारत ले हडपेको छ । सीमा क्षेत्र अतिक्रमणमा दार्चुलाको कालापानीमा चीन र भारतबीच युद्ध भएका बखतदेखि ३७२ वर्ग किमी क्षेत्र भारतीय सेनाले अतिक्रमण गरेर राखेको छ । माथि उल्लेखित भारतले नेपाललाई सिमानामा दिएको दुख हुन । यो कुटनितिक तरह बाट समस्या समाधान गरीनु पर्छ । नेपाली जनताले सिमानामा जोगाउन जाग्रम बस्नु पर्ने र ईज्जत जोगाउन मेला लगाउनु पर्ने अवस्थाको नेपाल सरकारले अन्य गर्नु पर्छ । आफ्नो स्वाभिमान गुम्न दिनुहुन्न । कफिको निम्तो मान्न जाँदा देखेको र सुनेको दुख अर्को बर्ष अर्कै निम्तोमा सिमानामा खुसि नेपाली देख्न पाईयोस । अर्को निम्तोमा सिमानामा सुखि र खुसि नेपाली असल छिमेकीको गुनासो होईन बयानगर्ने रहर छ तारादाई । भारतले लगाएको नाकाबन्दीको सामना गर्ने ओलिसरकारले सिमानाको समस्या समाधान गर्नतिर ध्यान दिईयोस । तारादाई ईज्जत जोगाउन बिचपट्टामा मेला व्यबस्थापन संगै सिमाना जोगाउन कालापानिमा सेना राख्न कुटनितिक पहल गर्नेकी ?
– लेखक कंचनपुरका पत्रकार पनि हुन् ।
पुनर्वासमा बर्षौ देखि सीमा स्तम्भ नै एसएसबीको कब्जामा
बैज्ञानिक कृषि तथा पशुपालन सम्बन्धि पाँच दिने तालिम सुरु
बेलौरीमा सशस्त्र प्रहरीद्वारा लागुऔषध सहित दुईजना पक्राउ
पुनर्वासको क्वारेन्टाइनमा खटिएका सशस्त्र प्रहरीमाथि एक युवकको आक्रमण
४ असार २०७७, बिहीबार १०:२१
पुनर्वासको क्वारेन्टाइनमा खटिएका सशस्त्र प्रहरीमाथि एक…
१ असार २०७७, सोमबार १७:३९